“ရှုပ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “ရှုပ်”	7
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 21, 2016 in Photography, Poetry |7comments
သင့်အေးရိပ် says: အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ… ဆိုလား..
ဆရာတော်ဦးဇောတိက ပြောတဲ့စကားလေး… လွယ်တော့မလွယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှင်းလေ ရှုပ်လေ ဘဝအထွေထွေ
HMM says: အရှုပ်တွေလုပ်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေတာကိုး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှင်းအောင်လုပ်ရင်း ရှုပ်ကုန်တာပါ နှင်းမမရေ
အောင် မိုးသူ says: ဓာတ်ကြိုးတွေသာမပါရင် လှမှာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဓါတ်ကြိုးသာမရှိရင် ဒီပုံကို ကျနော် မရိုက်ပါ
kotun winlatt says: လေးပေါက်ရေ . . . ကျနော်တော့ အရှုပ်တွေကြားမှာ အလုပ်တွေများနေတယ်ဗျို့